लुम्बिनीमा निर्माणाधीन पिस सेन्चुरी र शान्ति – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ चैत २२ गते १०:५९
शान्ति प्राकृतिक सहजता र समनताको राज्य हो। सजिलो अर्थात सहजता पत्ता लगाउनुनै शान्ति पाउने प्रकृयामा छिर्नु हो। यदि शान्ति या खुशी पाउन बाहिरी कुरामा मात्रै निर्भर रह्यो भने हामीले शान्ति या खुशी प्राप्त गर्छु भन्नु भ्रम मात्रै हो। किनकी बाहिरी थुप्रै चाहना र शर्तहरु सधैं परिवर्तनको अधिनमा हुन्छ।
जब कुनै व्यक्ति सबैखालका परिस्थतिमा खुशी रहन सक्छ त्यो व्यक्तिनै शान्ति र खुशी मानिस हो। राम्रो नराम्रो, खुशी दुःखीको फरकपन अवधारणबाट मुक्त भइ समनताभवमा जान सक्नु नै खुशी तथा स्थायी शान्ति पाउनु हो। श्वास फेर्न सजिलो छ, श्वास सबैभन्दा प्राकृतिक चिज हो। हामीले श्वास फेर्न केहि सोच्नुपर्दैन, श्वास फेर्न कुनै योजना बनाइराख्नु पर्दैन, श्वास फेर्न कुनै कदम चाल्नु पर्दैन र यो स्वाभाविक रुपमा संचालन हुन्छ। स्वाभाविक रुपमा यसमा आराम गर्ने क्षमतापनि हुन्छ। यी चिजलाई आफ्नो मार्गमा चल्न अनुमति दिउँ।
त्यहीँबाट खुशी र शान्तिको शुरुवात हुन्छ। त्यसैले खुशी हुन या दुखी हुनु शान्ति हुनु, अशान्ति हुनु सबै हाम्रै अधिनभित्रका कुराहरु हुन्। यसै ज्ञानको अभावका कारण अर्थात बाहिरी खुशी प्राप्त गर्ने लडाईँले आज विश्वमा दिनप्रतिदिन द्वन्द्व बढिरहेको छ।
यसको कारक तत्व के हो र यसको समधान कहाँ हो भन्ने कुरालाई अध्ययन गरि यसको समधान गर्नतिर हामी लागेनौं भने विश्व आक्रान्तले बिकराल रुप लिन सकिन्छ। यसको मुख्य कारक तत्वनै हामी आफैं हो।
शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति फोरमको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ जसले देशलाई समृद्धितिर डोराउन सकिन्छ र विश्वमा शान्ति ल्याउन सकिन्छ। मायादेबीले गम्भिरताका साथ बिनाशर्त प्रेमलाई स्विकार्दै सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिएर उनले आफ्नो जीवन बलिदान दियो।
हाम्रो परिवार हो। हाम्रो समाज हो। हाम्रो राज्य हो। हाम्रो देश हो। शान्ति, अशान्ति, खुशी दुःखी यी सबैको कारक तत्व हामी आफैं हो भन्ने यथार्तलाई बुझेर आजैबाट शान्तिको बाटो पहिल्याउँदै ”Let’s Make peace more fashionable then war” विश्वका शान्ति प्रेमीहरुका लागि शान्तिमय गन्तब्य सृजना गरौं।
जो विश्व शान्तिको अग्रदूतको रुपमा स्थापित भयो र आज बौद्ध धर्म मात्रै होइन केही समुदाय मात्रै होइन र देशको मात्रै होइन अहिले लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुल अर्थात जगको रुपमा स्थापित भएको छ।
जहाँबाट अहिलेको आक्रान्त विश्वलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने दुढ बिश्वासका साथ बौद्ध दार्शानिक श्याल्पा तेन्जि रिन्पोचेको बिशेष पहलमा पिस सेन्चुरी पवित्र घरको निर्माण थालिएको छ।
जर्मनी आर्किटेक्ट प्रोफेसन स्टीफन ब्राउनफेल्सले डिजाइन गरेको पिस सेन्चुरी कमलको फूल आकारको रहेको छ। कमल फूल हिलोमा उम्रिन्छ र घामको प्रकाश र न्यानोपनले यो फुल फुल्छ। कमलको फुलले अध्यात्मिक जागृति र ज्ञानको शुद्धता र पूर्णताको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
एउटै भवन भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको सभा हल, पिस म्युजियम, पिस पुस्तकालय, पिस मेडिटेसन हल, पिस शिक्षालय जस्ता फरक फरक हलहरु सहितको पवित्र घर निर्माणले हामी नेपालीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ।
यो कुनै एक ब्यक्ति रिन्पोचेको मात्र नभै विश्वका सबै शान्ति प्रेमीहरुको साझा घरको रुपमा निर्मणाधीन भवन केवल एउटा घर मात्रै नभई प्रत्येक मान्छेको हृदयभित्र शान्तिको बिजन रोप्न लागिएको छ। विश्व मानव जगतको हितका लागि निर्मणाधिन पिस सेन्चुरी सबै मानिसहरुको स्वामित्व महसुस हुनुपर्छ भन्ने हेतुले मुठी दान, एक रुपैँया, एक डलर जम्मा गरिँदैछ र यो ऐतिहासिक परियोजनामा सहभागी बन्न सबैमा अनुरोधपनि गरिएको छ।
सँगै र सबै मिलेर शान्तिलाई हाम्रो प्राथमिकतामा राखौ भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको परियोजनामा जसले जति सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गरौं किनकी सहयोग र उपहारको कुनै आकार हुँदैन। यदि कसैले आर्थिक सहयोग गर्न सकिँदैन भने यो ऐतिहासिक परियोजना सम्पन्नका लागि शुद्ध मनले आराधान गरौ, कामना गरौ त्यो पनि ठूलो सहयोग हो।
को हो श्याल्पा तेन्जि रिन्पोचे ?
श्याल्पा तेन्जि रिन्पोचे हिमालाय पर्वतको फेदीमा जन्मेको थियो। उ पवित्र बच्चको रुपमा चिनिँदै आएको थियो। चार वर्षको उमेरबाट बौद्ध शिक्षा लिन शुरु गर्नुभएको थियो। भारतको सारनाथ बौद्ध विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए भने पछि तिब्बतका बिभिन्न धर्म गुरुहरुबाट शिक्षा सशक्तिकरणका ज्ञानहरु प्राप्त गरेको थियो। बिभिन्न गुरुहरुमध्ये संगे दोर्जे छटल रिन्पोचे उनको मुख्य गुरु थिए।
अहिले रिन्पोचे विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा मानिसको अनमोल जीवनको सारलाई वास्तविकतामा ल्याउनका लागि प्रशिक्षण दिइरहनुभएको छ। जसरी एउटा सानो चाबीले ठूलो हबेली महलको ढोका खोलेर महल भित्र लुकेको बिशाल र भव्य खाजनाहरुको ढोका खोल्न सक्छ।
त्यसरी नै रिन्पोचेको संक्षिप्त शिक्षाले दैनिक हाम्रो जीवनको मार्गलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र जीवन परिवर्तनका गहन शब्दहरु प्रकट गर्न सकिन्छ। उहाँ अहिले यही अभियानमा हुनुहुन्छ।
उहाँले काठमाण्डौको कपनमा श्याल्पा गुम्बाको निर्माण गर्नुभयो। यसै गरी हङकङमा वेनचेङ कोङ्चु इन्टरनेशनल फाउन्डेशनको स्थापना गर्नुभयो र पछि एशियाभरि बौद्ध शिक्षा संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ ताइवन र मलेशियामा फाउन्डेशनलाई बिस्तार गर्नुभयो।
ई.स. २०१३ मा नेपाल सरकारले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा अनमोल मार्गको स्थापना बिकास गर्ने जिम्मा दियो र यो पवित्र भुमिमा विश्वलाई आकर्षण गर्न सकिने एक पबित्र घर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका सहित पिस सेन्चुरी स्थापना गर्ने अभियान थाल्नुभयो र अप्रिल २०१८ मा विश्वका लागि महाशिद्धा पिस सेन्चुरी निर्माणको थालनी गर्नुभयो र अहिले निर्माण क्रममा रहेको छ। उहाँले प्रत्येक श्वासमा आनन्द, एक सय अमुल्य उपदेश जस्ता चर्चित जीवन दर्शनका पुस्तकहरु लेखिएका छन्।